Tuesday March 29, 2016 - 13:48:42 in Wararka by Super Admin
Fiidnimadii hore ee xaley ayaa anigoo ku dhex guureynaya baraha bulshada iyo Website-yada Soomaalida waxaan indhaha ku dhuftay VIDEO si weyn la isula dhexmarayey oo ay baahisay koox lagu magacaabo Journalists for Justice (J4J) Kaas oo cinwaankiisu ah
Waxaan Isha la soo raacay Campaign ay FACEBOOK ka wadeen dhalinyaro Soomaali ah oo loogu magacdaray #Difaaca_Xasan_Xanafi. Waxaan helay Filimkii iyo qoraalo laga sameeyey, ka dibna waxaan u fadhiistay daawashadiisa.
Wuxuu ahaa VIDEO banaanka soo dhigayey xaqiiqda ku saabsan Sheeko aad loo hadal hayey waayadii dambe oo ku saabsan Xasan Xanafi Xaaji oo ah Suxufi Soomaaliyeed oo ku jira gacanta Dawladda Federaalka, laguna xukumay dil toogasho horaantii bishan.
Sheekada Xanafi –inkastoo ay xiiso laheyd- balse waxaa tabinayey hal dhinac oo kaliya kaas oo ah dadkii ka soo horjeeday (cadowgiisa ahaa) oo isugu jiray Wariyeyaal, Mas'uuliyiin Dowladeed iyo Agaasimeyaal Warbaahineed, mana jirin cid u garab raaricisay dhankiisa oo u doodday xuquuqdiisa iyadoo la wada ogyahay halka ay gaarsiisan tahay dhibaatada uu wajahayo kaligii.
Laakiin Kooxda (J4J) ayaa soo bandhigtay wax badan oo ka qarsoonaa arrinta Xasan Xanafi, iyo qaabka loo soo abaabulay qiraalka beenta ah ee afka looga geliyey, iyadoo jirdil iyo tacdiibin loo marayo.
Qeybta koowaad ee xaley la baahiyey oo ka mid ah Silsilado ilaa saddex qeybood ah- sida kooxdu sheegtay-ayuu Xasan Xanafi ku kashifayaa been abuurka ay sameysay hay'adda sirdoonka 'Qaranka' ee ay ku sheegteen in Xasan laga soo qabtay xuduudka Kenya.
Xasan Xanafi wuxuu sheegayaa in Police-ka magaalada Nairobi ay soo qabteen isagoo jooga xaafad uu ka daganaa magaalada, ka dibna lagu soo xiray saldhigga Police-ka ee Pangani, halkaas oo muddo saddex habeen uu ku xirnaa.
Waxyaabaha lagala dhex bixi karo VIDEO-ga (J4J) waxaa ka mid ah in Xasan Xanafi markii ugu horeysay ee la soo xiray aanan loo soo qaban dambiyo saxaafadeed ama dilal uu geystay sababtoo ah wuxuu leeyahay markii la I geeyey saldhigga waxaa la i weydiiyey in aan ka qeybgalay weeraradii Lamu, Mpeketoni iyo Garissa. Balse markii la ogaaday in uusan wax lug ah ku laheen weeraradaas ayaa Saraakiishii Kenya dalbadeen si hoose loola mucaamilo oo laaluush la siiyo si ay u sii daayaan.
Intii uu ku xirnaa Saldhigga Pangani Eheladiisa iyo Qaraabadiisa Juhdi adag ayey ku bixiyeen sii deyntiisa, xitaa waxaa macluumaadka qaar ay sheegayaan in Police-ka Kenya ay qaateen lacago badan balse nasiib xumo waxaa goordambe ay meeshu isku badashay Seylad xoolaha lagu kala iibsado markii ay yimaadeen Mas'uuliyiin ka tirsan DF, Saraakiil kale oo xambaarsan boorsooyin lacag ah si ay u iibsadaan Xasan Xanafi.
Sida uu Xasan Afkiisa ka sheegayo waxaa dadkaas ka mid ahaa Maxamad Cali America (Safiirkii hore ee Somalia u joogay Kenya), Necholas Kay (Wakiilkii hore ee QM u qaabilsanaa Somalia) iyo Ninka lagu magacaabo Tuuryare oo isna heysta Hay'adda Sirdoonka DF, Waxayna la mucaamileen Generalka ugu Sareeya Police-ka dalka Kenya David Kamaiyo, sidaas ayaan ugu dambeyntii DF ay ku iibsatay Xasan Xanafi, laguna keenay magaalada Muqdisho.
Mar haddiiba ay soo iisbadeen, waxaa laga habboonaa iney yiraahdaan "waan soo qabanay”.
Ehelkii uu ka dhashay Xasan Xanafi oo juhdi waliba u bixiyey soo bad-baadinta Wiilkooda ayaa halkaas ku rajo beelay sababtuna waa labadan arimood.
1 – Dad iyaga ka lacag badan oo Mas'uuliyiin ah oo u yimid in ku gorgortamaan iibsashada Wiilkooda.
2- Iyo tan labaad oo ah in lala mucaamilay Mas'uuliyiin ka sareysa Saraakiishii gacanta ku heysay wiilkooda ee ay iyagu la mucaamilayeen markii hore.
Waxaana taasi micnaheedu tahay in wiilkooda ay kala wareegeen dad adeegsanaya lacag dowladeed iyo awood dowladeed, sidaasna lagu soo kaxeystay oo lagu keenay Magaalada Muqdisho.
Iyadoo ay sheekadu sidaas tahay ayaa hadana Xasan Xanafi markii laga soo dajiyey garoonka Muqdisho waxaa sha'nigiisa laga dhigay war culus oo saaran canaawiinta kore ee warbaahinada, iyadoo lagu sheegayo gacan ku dhiigle lagu soo qabtay howlgal gaar ah, waxaana Propaganda-daas horboodayey Sirdoonka Dawladda Federaalka iyo qaar ka mid ah Warbaahinta Muqdisho.
Tani waxay ahayd beenta ugu weyn ee lagu kashifay qeybta koowaad ee silsiladan taxanaha, Waxaase macquul ah in qeybaha soo socda ay daboolka ka qaadi doonaan been-abuurro dheeraad ah iyo dacayaad waxba kama jiraan ah oo laga fidiyey Sheekada Xasan Xanafi sababtoo ah Sheeko been lagu bilaabay run laguma soo gaba-gabeeyo!.
Maadama ay Sirdoonka Dawladda Federaalka iyo Warbaahintooda ay ka been sheegeen xaqiiqda runta ah ee ku saabsan soo gacangelintiisa, Ma waxay ka run sheegi doonaan maxkamadeyntiisa iyo su'aalo weydiintiisa?.
Wixii jiraaba wey soo butaaci doonaan balse waa in aan fursad siinaa oo isha ku heynaa qeybaha kale ee cajaladda Video-ga iyo waxa ka soo muuqan kara.
W/Q: Ciise Daacad